Amụma nzuzo - Forex Lens
Ndị na-ahụ maka ọrụ agaghị agbazite, ree, nweta ma ọ bụ n'ụzọ ọ bụla jiri ozi nchekwa data ndị ahịa. A ga-edowe ozi a ka ọ bụrụ ihe nzuzo n'ụzọ kacha mma.
Anyị na-anakọta adreesị ozi-e nke ndị na-agwa anyị okwu site na ozi-e, nchịkọta ozi gbasara ibe ndị ahịa ji abanye ma ọ bụ gaa, ọnọdụ dị elu, adreesị IP na ozi ndị ahịa nyere aka (dịka ozi nyocha na / ma ọ bụ ndebanye aha saịtị ahụ) .The ozi Anyị na-anakọta iji meziwanye ọdịnaya nke ibe weebụ anyị yana ogo ọrụ anyị.
Anyị na-arịọ maka ozi dịka aha gị, aha ụlọ ọrụ, adreesị ozi-e, adreesị ịgba ụgwọ na ozi kaadị akwụmụgwọ maka ndị ọrụ nke ọrụ anyị. Anyị na-eji ozi anakọtara maka ebumnuche ndị a niile: ndenye ngwaahịa na ọrụ, ịgba ụgwọ, njirimara na nyocha, mmelite ọrụ, kọntaktị, na nyocha.
Kuki bụ obere data, nke na-agụnyekarị ihe nchọpụta pụrụ iche na-enweghị aha, nke ezigara na ihe nchọgharị gị na kọmputa weebụsaịtị wee chekwaa na draịvụ kọmputa gị. Achọrọ kuki iji ọrụ anyị. Anyị na-eji kuki idekọ ozi oge nke oge a, mana anaghị eji kuki ebighebi.
Anyị na-eji ndị na-ere ahịa na ndị ọzọ na-ekerịta ndị ahịa iji nye akụrụngwa dị mkpa, ngwanrọ, ịkparịta ụka n',ntanet, nchekwa na teknụzụ ndị ọzọ metụtara achọrọ iji rụọ ọrụ ndị enyere. Agbanyeghị na anyị nwere koodu, ọdụ data na ikike niile nke ngwa ahụ, ị ​​na-edobe ikike niile na data gị.
Anyị nwere ike igosipụta ozi nke amata onwe gị n'okpuru ọnọdụ pụrụ iche, dị ka ịnabata subpoenas ma ọ bụ mgbe omume gị megidere Usoro ọrụ.
Anyị nwere ike imelite iwu a kwa oge na oge ị ga-agwa gị maka mgbanwe dị mkpa n’otú anyị si akpaso ozi nkeonwe site na izipu ozi na adreesị ozi-e akọwapụtara maka akaụntụ gị ma ọ bụ itinye ọkwa pụtara ìhè na saịtị anyị. Nke a gụnyere nyefe data na ihe omume Forex Lens na-enweta ma ọ bụ soro na ụlọ ọrụ ọzọ.
Ejikọtara iwu nzuzo a iji nyere ndị na-eche maka otu esi eji 'Ozi Nkeonwe' (PII) n'ịntanetị. PII, dịka akọwara na iwu nzuzo nzuzo nke US na nchekwa ozi, bụ ozi enwere ike iji ya n'onwe ya ma ọ bụ jiri ozi ndị ọzọ mata, kpọtụrụ, ma ọ bụ chọta otu onye, ​​ma ọ bụ iji mata onye ọ bụla. Biko gụọ iwu nzuzo anyị nke ọma iji nweta nghọta doro anya banyere otu anyị si anakọta, jiri, chedo ma ọ bụ na-ejikwa ozi gbasara onwe gị nke ọma dabere na weebụsaịtị anyị.
Mgbe ị na-agwa ma ọ bụ na-edebanye aha na saịtị anyị, dịka o kwesiri, enwere ike ịgwa gị ka itinye aha gị, adreesị ozi-e, adreesị nzipu ozi, akara ekwentị, ozi kaadị kredit, nọmba nchekwa ọha, Ubi Ahịa ma ọ bụ nkọwa ndị ọzọ iji nyere gị aka na ahụmịhe gị.
Anyị na-anakọta ozi site n'aka gị mgbe ị debanyere aha na saịtị anyị, debe iwu, denye aha na akwụkwọ akụkọ, zaa nyocha, mejupụta ụdị, Jiri Live Chat, Mepee Akaụntụ Nkwado ma ọ bụ tinye ozi na saịtị anyị.
Nye anyị nzizi banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị Na-achọ
• Iji hazie ahụmịhe gị ma nye anyị ohere ịnye ụdị ọdịnaya na onyinye ngwaahịa nke kachasị mmasị gị.
• Iji meziwanye ebe nrụọrụ weebụ anyị iji wee jeere gị ozi ọma.
• Iji mee ka anyị rụọ ọrụ gị mma karịa ịza ajụjụ maka ọrụ ndị ahịa gị.
• Iji dọọ asọmpi, nkwalite, nnyocha ma ọ bụ njirimara saịtị ọzọ.
• Ịjụ maka ọkwa na nyocha nke ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa
• Iji soro ha na-eso ha ma ọ bụrụ na ị ga - edekọrịta (nkata ndụ, email ma ọ bụ ajụjụ ekwentị)
Anyị na-eme ihe dị iche iche nchedo mgbe onye ọrụ nyere iwu ịbanye, nyefee, ma ọ bụ nweta ozi ha iji chebe nchekwa nke ozi gbasara gị.
Eeh. Kuki bụ obere faịlụ nke saịtị ma ọ bụ onye na-eweta ọrụ ya na-enyefe na draịvụ kọmputa gị site na ihe nchọgharị weebụ gị (ọ bụrụ na ị kwe) nke na-enyere saịtị ma ọ bụ ndị na-eweta ọrụ aka ịmata ihe nchọgharị gị ma jide ma cheta ụfọdụ ozi. Iji maa atụ, anyị na-eji kuki enyere anyị aka icheta na hazie ihe ndị dị n'ụgbọ ahịa gị. A na-ejikwa ha enyere anyị aka ịghọta mmasị gị dabere na ọrụ saịtị ma ọ bụ nke ugbu a, nke na-enyere anyị aka ịnye gị ọrụ ndị ka mma. Anyị na-ejikwa kuki iji nyere anyị aka kpokọta data mkpokọta gbasara okporo ụzọ saịtị yana mmekọrịta saịtị ka anyị wee nwee ike ị nweta ahụmịhe na ngwa ọrụ ka mma n’ọdịnihu.
• Nyere aka icheta ma hazie ihe ndị dị na ụgbọ ibu azụmahịa.
• Ghọta ma chekwaa mmasị ndị ọrụ maka nleta n'ọdịnihu.
• Soro mgbasa ozi.
• Chịkọta data nchịkọta banyere okporo ụzọ saịtị na saịtị mmekọrịta iji nyefee ahụmịhe na ngwaọrụ dị mma n'ọdịnihu. Anyị nwekwara ike iji ọrụ ndị ọzọ tụkwasịrị obi na-egwu ozi a na nnọchite anyị.
Nwere ike ịhọrọ ka kọmputa gị dọọ gị aka na ntị oge ọ bụla a na-eziga kuki, ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ gbanyụọ kuki niile. Na-eme nke a site na mwube ihe nchọgharị gị. Ebe nchọgharị dị obere, lee NchNhr Enyemaka nke ihe nchọgharị gị iji mụta ụzọ ziri ezi iji gbanwee kuki gị.
Ọ bụrụ na ndị ọrụ gbanyụọ kuki na ihe nchọgharị ha:
Ọ bụrụ ngbanyụ kuki, ọ ga-agbanyụ ụfọdụ atụmatụ nke saịtị ahụ.
Anyị anaghị ere, ahia, ma ọ bụ na-ebufe ndị ọzọ na mpụga ozi nkeonwe nkeonwe gị belụsọ na anyị nyere ndị ọrụ ọkwa ọhụụ. Nke a anaghị agụnye ndị mmekọ websaịtị na ndị ọzọ na-enyere anyị aka ijikwa weebụsaịtị anyị, na-eduzi azụmaahịa anyị, ma ọ bụ na-ejere ndị ọrụ anyị ozi, ọ bụrụhaala na ndị ọzọ kwenyere idobe ozi a. Anyị nwekwara ike ịhapụ ozi mgbe ewepụtara ya dabara adaba iji rube isi n'iwu, ịmanye atumatu saịtị anyị, ma ọ bụ ichebe ikike nke anyị, nke ndị ọzọ, akụnụba anyị.
Google, dịka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji nye mgbasa ozi na saịtị anyị. Ojiji Google nke kuki DART na-enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ anyị dabere na nleta ndị gara aga na saịtị anyị na saịtị ndị ọzọ na .ntanetị. Ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ojiji nke kuki DART site na ịga na iwu nzuzo nke Google Ad na Network Network.
CalOPPA bụ iwu steeti mbụ na mba ahụ chọrọ weebụsaịtị na azụmaahịa yana ọrụ ịntanetị iji biputere iwu nzuzo. Iwu iru erughị ka California chọrọ mmadụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ ọrụ na United States (na conceivably ụwa) na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-anakọta Ozi nkeonwe Ozi si California na-eziga ka biputere a mara iwu nzuzo na ya na ebe nrụọrụ weebụ na-ekwupụta kpọmkwem ozi anakọtara na ndị ahụ ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị a na-ekekọrịta ya. - Lee ihe na: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
Dị ka CalOPPA si kwuo, anyị kwetara ihe ndị a:
Ndị ọrụ nwere ike ịga na saịtị anyị n'enweghị aha.
Ozugbo e mepụtara iwu nzuzo a, anyị ga-atụkwasị njikọ ya na ibe anyị ma ọ bụ dịka opekempe, na peeji mbụ dị mkpa mgbe ị banyere na ebe nrụọrụ weebụ anyị.
Usoro Nzuzo anyị gụnyere okwu 'Nzuzo' ma nwee ike ịchọta ya na ibe akọwapụtara n'elu.
• Na Amụma Nzuzo anyị
• Site na iziga anyị
• Site na ịbanye na akaụntụ gị
Anyị na-asọpụrụ Nsonaazụ Nsonaazụ na Esochina, kuki kuki, ma ọ bụ jiri mgbasa ozi mgbe usoro Nchọgharị Nsuso (DNT) nọ n'ọnọdụ.
Ụlọ ọrụ anyị ọ na-ekwe ka nsụgharị akparamàgwà nke atọ?
Ọ dịkwa mkpa iburu n'uche na anyị na-ekwe ka nsuso akparamagwa nke atọ
Abịa n’ihe gbasara ịnakọta ozi nkeonwe sitere n’aka ụmụaka ndị n’erubeghị afọ iri na atọ, Iwu Nchedo Nzuzo Childrenmụaka n’Intanet (COPPA) na-etinye ndị nne na nna. Federal Trade Commission, ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa ndị ahịa nke United States, na-akwado Iwu COPPA, nke na-akọwapụta ihe ndị na-arụ ọrụ weebụsaịtị na ọrụ ịntanetị ga-emerịrị iji kpuchido nzuzo ụmụaka na nchekwa ha n'ịntanetị.
Anyị ga-agwa gị site na email
• N'ime ụbọchị azụmahịa 1
Anyị ga-agwa ndị ọrụ ahụ na saịtị site na ọkwa
Anyị na-ekwenyekwa na Iwu Onye Ndozi Onwe Onye nke na-achọ ka ndị mmadụ nwee ikike ịgbaso iwu na-akwado ikike megide ndị nchịkọta data na ndị nhazi nke na-adabereghị n'iwu ahụ. Ụkpụrụ a achọrọ ọ bụghị naanị na ndị ahụ nwere ikike imebi iwu megide ndị ọrụ data, kamakwa na ndị mmadụ n'otu n'otu na-achọghachi n'ụlọikpe ma ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị iji nyochaa na / ma ọ bụ na-ekpechitere ndị na-adịghị anabata iwu site na data processors.
• Nhazi usoro na izipu ozi na mmelite gbasara iwu.
• Na-ezitere gị ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa gị na / ma ọ bụ ọrụ gị
• Ahịa na listi nzipu ozi anyị ma ọ bụ na-aga n'ihu na-ezipụ ozi ịntanetị na ndị ahịa anyị mgbe ọnụọgụ mbụ ahụ mere.
• Ejila okwu ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie ma ọ bụ adreesị ozi-e.
• Gụnye adreesị anụ ahụ nke azụmahịa anyị ma ọ bụ isi ụlọ ọrụ anyị.
• Lelee ọrụ ahịa ahịa nke atọ maka nnabata, ma ọ bụrụ na ejiri ya.
• Na-asọpụ ngwa ngwa / wepu aha ngwa ngwa.
• Nye ndị ọrụ ohere ka ha wepu aha site n'iji njikọ dị na ala nke email ọ bụla.
anyị ga-ewepụ gị ozugbo ALL ederede.
Nchịkọta Ikpeazụ na 2018-05-23